rafozan-doza | Martsa 2011 | 5
Indraindray ah izany mieritreritra hoe tsy tokony ny diktatera sy ny hoe apprenti-diktatera no omena tsiny fa ireto vahoaka vendra-po ireto. Marina ihany alou le hoe izy no manao ny ataony ka ahoana ny vahoaka tsy manan-tsiny no endrikendrehana. Rehefa atao anefa ny fandihana dia otran'ny hoe ny vahoaka mintsy no mila an'ilay olona hitondra azy any ankady. Ao anatin'ny hoe filana eo @ fiainany izany io.
Sendra hitako t@ tele ity, asa ra fa fantatrareo ny hoe nanombohan'ny fiangonana advantista. Nisy razoky niketriketrika ny hoe daty hiverenan'i jesoa ony hoe t@ 1843 lery no hiverina. Dia nahazo kil bobaka be lery t@ izany satria tena kajy matotra be hoan'ny atidohan'ny olona t@ izany moa le izy sady otran'ny orijinaly be. Evidawazy fa tsy tonga i jesoa. Dia nikozy ndray razoky hoe: ah non, diso ny kajy satria tsisy taona 0, @ 1844 izany lery no ho avy. Dia mbola tonga indray ry vendrana hiandry an'ny tena jesoa. Mbola nomeny jesoa ny endraso eo Paoly fa eee in ozy nareo? tsy ny hoe nanawain an'razoky no nataon'zala fa vao mia izy nanangana secta dia io fiangonana adva hitantsika @ izao io no niafarany.
Tsy ny hoe fanasongadinana ny havendranana ny vahoaka nanomboka ny advantista akory no tiako hahatongavana eto an. En fait manja doly ny sipa adva ny tena marina, azo jerena doly ny hitako alou fa asa lisany... Fa ny tiako lazaina fotsiny hoe tena ao anatin'ny hoe besoins fondamentaux an'ny olona mitovitovy tadin-dokanga mihintsy ny hoe mino ny atsanga tsy aman'orana. Marina tena marina fa mila olona hoe manana leadership skills vao afaka mahavangona olona betsaka fa au fond izany ireny olona ireny dia efa otran'ny hoe niandry "mpamonjy" mihintsy. Jereo tsara anie fa na tsy lany prezida aza i Maihol @ 2013 dia mbola hiroborobo fatratratra ny secta an'lery e?
Eritrereto hoe i Gaddafi izany efa tena tsy ankinafinafina mihintsy fa atao fanta-poko fanta-pirenena ny hoe famonoany ny mpiray tanindrazana aminy. Dia enao mieritreritra hoe hoe tsy hivoaka velona ity. Kanefa jerena, hay tena misy olona mbola tena hoe mankafy sy fanclub an'lery ihany. Dia aleo tsorina ny marina fa na hisy ra mandriaka tahaka ny inona aza eo dia poinsa mety mbola hotafiditra 2eme toro ihany i Gaddafi ra asiana fifidianana hoe faran'izay mangarahara aza any Lybia ee. Tsy hoe tsy ratsy toetra i Gaddafi na otran'zany fa ny vahoaka mihintsy no mila azy ho ratsy toetra.
Idem eto amintsika. i Deba alou voalohany indrindra tsy mila tantaraina intsony angamba ny hoe havendranana tapitrohatra an'ny vahoaka izay tia azy, tena bobaka tokoa anefany io an. i ra8 indray, eritrereto anie ny hoe fivarotana sakabelou nataon'i lery e. Tsy hiditra @ le resaka hoe fampandrosoana haingana sy ny hoe resaka fitifirana teny @ Ambotsorohatra ah fa satria debatable be ireny. Fa ilay fikan'lery hatra@ voalohany hoe fahamasinana, fahamarinana ee, mangarahara ee, ireo zavatra tena azo lazaina hoe azo atao sy hoe faisable izany kanefa dia oppose an'zay no tena nataony... dia mbola misy mino ihany hoe tena "mpamonjy" nedala... i tgv moa dia tsy lazaina intsony. Vao manomboka @ hoe radio akatona no ahitana raison hanonganam-panjakana dia efa mampiaky ny razana ny hoe @ fomba ahoana no ahatokisana sy hoe hinoana bandy otran'zany. Ny filaza matetika moa hoe ny foza, tsy dia nianatra loatra sy hoe mitrongy vao homana dia mora manipuler-na. Kanefa hoy aho hoe, ny vahoaka mintsy no mila ny fampandriana adrisa sy fivarotana sakabelou eo @ fiainany.
Ny tena fototr'izany rehetra izany hoy aho hoan'ny Afrika manokana dia tsy hoe noho ny fanjanahatany loatra. Fa noho ny hoe t@ fanjanahan-tany isika dia nanaiky ny fitoriana an'A/tra. Otra'ny hoe be loatra ny fidiran'ny resaka A/tra eo @ fiainantsika. Jereo tsara anie fa ny hoe Eoropeana sy ny Amerikana ary ihany koa ny hoe sinoa dia tsy dia mirara an'zavatra otran'zany e. Hoe zavatra lojika sy hoe misy dikany ihany no tena miteny. Tsy hoe ny fisian'A/tra eo @ fiainana akory no mahatonga antsika hoe naive sy hoe vendrana fa ny tiako tenenina hoe izay no lasa nanamboatra ny kolontsaintsika le hoe mora matoky sy hoe minomino foana ee. Lasa otran'ny hoe olon'ny fo be loatra... lasa tsy misaina be intsony fa ny fo no mibaiko ze atao rehetra, indrindra moa fa ra misy olona maromaro mitovy fo otran'zany koa...
dia izay ee, vendra-po: vendrana + fo
Ny tena tanjon'ity lahatsoratra ity moa dia ny hamohahako an'ity faminaniana iray ity: mbola hoe diktatera ihany ny filohantsika manaraka!!
Izay mino ahy, aoka izy hanaraka ny teniko
ny mesia, mpamonjinareo,
03/03,2011 Sokajy Rediredy